Soomaali | Kronofogden
Ku soo dhawoow bogga internetka oo Hey’adda qaabilsan arrimaha soo ururinta lacagaha deymaha[Kronofogden].
Boggan waxa ka heleysaa warbixin guud oo luqadaada hooyo ku qoran, oo ku saabsan anaga waxaa qabano iyo sidaa adiga noola soo xiriirikartid, iyo xitaa waxyaabaha muhiimka ah inaa ku fakirto markaa anaga caawinaad nooga baahato ama markaa anaga waraaq kuu soo dirno. Warbixintaan waa warbixin guud oo haddii aad su’aal kale rabto ina ana weeydiisid fadlan waa nala soo xiriiri kartaa anaga.
Anaga waxaa nahay hey’add dowladeed oo laga rabo waxa ey dowlada Iswiidhan iyo barlamaanka qaranka go’aamiyaan inaa hirgalino. Anaga baa mas’uul iska ah oo waxa ku dhaqmeynaa sharciyada iyo xeerarka ey dowlada go’aamiso, laakin dhammaan shaqadeyna natiijadeeda waxaa koontaroolo ama qiimeyo dowlada. Hey’addeena Kronofogden waxey hoos imaataa Wasaarada maaliyada[Finansdepartementet].
Anaga shaqadeyna baa waxey tahay inaa caawino dadka aan lacagtooda loo soo celin, iyo inaa kaalmo iyo talo bixin siino dadka deynta lagu leeyahay. Anaga shaqadeyna baa ah inaa labada dhinac u dhaxeyno, aan midna u hiilin. Anaga shaqaalo ahaan waxaa gaareynaa 2000 oo qof oo u kala qeybsan 40 xafiis dhammaan wadanka oo dhan iyo xafiskeena maamulka wuxuu ku yaal Sundbyberg. Sanadkasto waxaa suurtagalinaa in deyn qiimaheeda gaareyso 1 bilyan in la bixiyo.
Anaga dhowr wax oo kala duwan baa mas’uul ka nahay. Meeshaan baa ka akhrisankartaa kuwa ka mid ah.
Anaga waxaa ka caawinaa deymaha aan la bixin
Haddii qof lacagtii uu sugaayay la siin anaga buu caawinaad na soo weeydiisankara. Dowlada, degmooyinka, shirkadaha iyo dadka shaqsiyada dhammaan weey nala soo xiriiri karan. Haddii aad adiga tahay shaqsi ama shirkad oo qofkale lacag ku leedahay waa nala soo xiriiri kartaa. Waxey tusaale ahaan dhicikarto inaa qof lacag deyn ku siisay uusan lacagtaada sidaa ku heshiiseen dib kugu soo celin, qof uusan soo bixin waraaqada lacag bixinta ama qof aad qol ama guri ka kireysatay kirada bixin. Markaas camal anaga baa kaa caawin karno inaa heshid go’aan ah in deynta ey sax tahay.
Haddii aad haysatid go’aan noocas waxaa adiga soo codsankartaa hirgalin. Taasna micnaheeda waxey tahay inaa anaga qofka aad deynta ku leedahay mushaarkiisa ama hantidiisa kale aan qiimeysankarno. Wixi na soo gaaro markaas adiga baa kuu soo direynaa.
Anaga shaqadeyna waa ka hortegid ahaan
Anaga waxaa aaminsanahay in aqoonta ey muhiim tahay siduu dhaqaalaha miisaaniyad u yeesho. Anaga shaqadeyna oo ka hortegida waxey ku saabsantahay inaa warbixinta faafino iyo aqoonta gaarsiino dadka halista ku jiro in maamulka dhaqaalahooda gacantooda ka bixi rabo. Qeybta qaabilaada macmiisha waxey kaaga jawaabi su’aalahaada iyo ku kaalmeen iyo talo ku siin adiga, haddii xitaa anaga aan deyn kugu laheen. Anaga waxaa xita shirkadaha deymaha iska leh kala shaqeynaa iney ayaga nidaamkooda uusan sabab u noqon deyn micno daro ahaan.
Anaga baa go’aan ka gaarno deyn sifaynta
Deyn sifaynta waxey micnaheeda tahay in adiga oo deyn aad u culus lagu lee yahay, marmar qaas ah, loo cafinkaraa dhammaan deynta ama in kamid ah deynta. Caadiyan waxaa adiga laguu suubin qorshaha bixinta oo shan sano. Haddii qorshahaas aad ku dhaqantid oo bixisid lacag sida lagu qorsheeyay waxey micnaheeda tahay in shan sano kadib aad tahay qof aan deyn lagu laheen. Adiga deyn sifaynta anaga baa naga soo codsankarta. Anaga waxaa suubin baaritaan oo markaas kadib baa go’aan ka gaareynaa haddii adiga lagu siin ama lagu siineyn deyn sifaynta.
Anaga baa ka warhayno shaqada ey qabato hey’adda arrimaha kicidda
Anaga baa baarno maamulayaasha oo arrimaha kicidda iyo sida ey ula dhaqmaan kicidyada qaaska. Haddii ashkood ka imaado arrimahas midkood anaga waxaa codsankarnaa in la nusqaamiyo mushaarka maamulahaas. Anaga waxaa qaas ahaan xooga saareynaa in xalinta kicidda eysa qaadan waqti ka badan inta loogu talagalay. Anaga waxaa kale oo xitaa mas’uul ka nahay in maamulaha kicidda si dhaqsi badan uga shaqeeyaan ballanqaadka mushaarka ey dowlada bixiso.
Maxaa adiga suubin haddii anaga waraaqad kuu soo dirno?
Waxey ku xirantahay waraaqada nooca ey tahay. Labada waraaq aan badanaa soo dirno waxey kala yihiin iyo ”Bixi deynta”.
Waxa lugu faraya waxey micnaheeda tahay inuu jiro qof oo u arko inuu lacag kugu lee yahay. Haddii ey sax tahay deynta, bixi deynta oo sii toos baa ugu diri qofkaas ama haddii ey lee yihiin wakiil. Haddii aad u aragto iney qalad tahay waa soo dacwoonkartaa. Markaasna anaga baa noo soo qori waraaqad oo waxaa soo hadal qaadi waxyaabaha adiga u aragtid iney qalad yihiin. Waa xitaa muhiim inaa adiga lambarkaada aqoonsiga ku soo qortid iyo lambarka arrinta oo waraaqada amarka ku qoran. Haddii aadan nala soo xiriirin anaga waxaa xaqiijineynaa deynta. Taasna waxey micnaheeda tahay inaa anaga go’aamineyno iney deyn jirto iyo iney adiga waajib kugu tahay inaa bixiso. Marmar amarka wuxuu ku saabsanaankara wax kale aanan eheen deyn baa lagugu leeyahay, tusaale ahaan inaa guri ka guurtid ama soo celi alaab aad deynsatay.
Waraaqada kale aan badanaa isticmaalno waxaa la dhaha ”Bixi deynta”. Taasna micnaheeda tahay in amarka isku badalay inaa go’aamino in deynta ey sax tahay. Ama ey tahay deyn oo quseeyn qof shaqsi ama shirkad.
Markaas camal tusaale ahaan Hey’adda canshuuraha, xafiska ceymiska ama hey’add kale baa soo sheegteen in adiga wax kugu leeyhiin. Waraaqad noocas adiga wax kama dhihi kartid oo lama mid ahan waraaqada amarka. Haddii aad adiga u aragto iney qalad tahay arrinta waxaa toos ula xiriiri hey’adda oo rabto inaa lacagta bixiso. Haddii aad xitaa sidaa suubisid waa inaa adiga deynta ku soo bixisaa waqtiga laguu qabtay gudahiisa oo waraaqada ku qoran, haddii kale anaga waxaa bilaabeynaa baaritaankeena iyo ina qiimeysano hantidaada sidaa lacagta kaaga helno.
Sidaa baa ku soo bixin digniinta deynta aan kuu soo dirnay:
Haddii aad lacagta Iswiidhan gudaheeda ka soo direysid adiga waxaa isticmaashaa bankgiro 756‑2036. Adiga waa muhiim inaa ku soo qortaa lambarkaada aqoonsiga ama lambarka ururka iyo lambarka deynta oo quseeyo lacagta aad bixineyso. Adiga lambarka deynta ama lambarka arrinta waxaa ka heleysaa waraaqada aan kuu soo dirnay.
Haddii aad wadankale ka soo direyso ma u baahnid plusgiro ama bankgiro. Laakin adiga waxaa soo qori bangigeyna magaciisa iyo ciwaankiisa iyo lambarka la dhaho BIC iyo lambarka la dhaho IBAN. Waa inaa ku fakirtaa in lambarka IBAN is wada raacisaa markaa qoreysid oo aadan kale durjin.
Adiga waa inaa ku soo qortaa lambarkaada aqoonsiga ama lambarka ururka iyo lambarka deynta aad bixinoosid. Adiga lambarka deynta ama lambarka arrinta waxaa ka heleysaa waraaqada aan kuu soo dirnay.
Miyaa dooneysaa inaa su’aal na weeydiisid ama inaa nala soo xiriirto?
Xaaladkasto uu dhici karto sharraxaad laga ma bixin karo, laakin waxkasto oo dhaco waxa ugu muhiimsan baa waxey tahay inaa adiga caajisin oo adiga xaalada tagaan wax ka qabatid. Haddii adiga aadan haysan qof ku caawiyo aad bey muhiim u tahay inaa sida ugu dhaqsaha badan nala soo xiriirto sidaa kuu caawino. Kaa ma ballanqaadi karno inaa luqadaada naqaano laakin waxaa kugu la hadlin markaa ku caawineyno ingiriiska iyo waxaa noo shaqeyo shaqaalo oo dhowr luqadood yaqaan. Iyo haddii ey noqoto turjumaad waraaqad ama hadal waxaa kaa ballanqaadeynaa inaa markasto xalka kan ugu wanaagsan inaa ku dadaalno.
Adiga fadlan ku soo dhawoow oo soo wac telefoonka adeeg macmiisha 0771–73 73 00. Anaga waxaa furan nahay maalmaha shaqada saacadaha 8 ilaa 16. Haddii aad wadankale naga soo waceysid telefoon lambarka waa +46 8 564 851 50. Adiga waxaa xitaa iimeeyl noogu soo diri kartaa ciwaankaan kontakt@kronofogden.se